Mepụta Digital Roadmap Maka Forlọ Ahịa Na-aga n'ihu | Martech Zone
Ebe ọ bụ na ọrịa ahụ gbawara, anyị ahụla mgbanwe mgbanwe dijitalụ, na ịgbanwee ọrụ dịpụrụ adịpụ na ịnweta ọrụ dijitalụ karịa ka ọ dị na mbụ - omume na-aga n'ihu n'ihu ọrịa na-efe efe. Dabere na McKinsey & Companylọ ọrụ, anyị gafere afọ ise na-aga n'ihu na ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa dijitalụ n'ihe gbasara izu ole na ole. Karịrị Pasent 90 nke ndị isi na-atụ anya ọdịda site na COVID-19 iji gbanwee gbanwee ụzọ ha si azụ ahịa n'ime afọ ise na-abịanụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ ndị na-akọwa ọrịa a ga-enwe mmetụta na-adịgide adịgide n'àgwà na mkpa ndị ahịa. N'ezie, pasent 75 nke ndị na-azụ ahịa nabatara dijitalụ na nke mbụ ya kemgbe atụmatụ ọrịa ahụ na-aga n'ihu na post-COVID-19. Ha sonyeere ndị agha na-eto eto nke Ndị ahịa ejikọrọ, bụ ndị na-ejikọ aka na ụdị site na ọwa dijitalụ dị ka weebụsaịtị na ngwa.
Ndị ahịa ejikọtara, na-agbasa ọgbọ ọ bụla, bụ hyperaware nke ahụmịhe akara aka yana ịmara ọrụ nke ịntanetị dị elu. Ndị ahịa a na-atụle ahụmịhe na nke ọma, ọ bụghị ngwaahịa na ọrụ na-asọ mpi. Ha ga-ekpebi ahụmịhe Uber na nke Amazon, na ahụmịhe kachasị mma ga-abụ atụmanya ha kacha nta maka nke ọzọ. Companieslọ ọrụ na-aga n'ihu ịrị elu maka ụlọ ọrụ ị paya ntị nke ọma na ụdị dị na mpụga ohere ha ma na-eso usoro ọhụụ ọhụrụ. Otu akụkọ HBR kwuru na ihe kpatara ihe karịrị ọkara (pasent 52) ​​nke Fortune 500 furu efu kemgbe afọ 2000 bụ ọdịda ha iji nweta mgbanwe dijitalụ. Gbaa mbọ hụ na ọwa dijitalụ dị na, ma ọ bụ karịa, ndị asọmpi na-apụtaghị ìhè ga-abụ isi ihe ga-eme ka mmepe na-aga n'ihu.
Hankwalite Njem Ndị Ahịa
Gburugburu ejikọtara ọnụ taa, yana mmetụta nke ọrịa a na-efe efe, emeela ka atụmanya ndị ahịa na-atụ anya maka ọrụ dijitalụ na ahụmịhe anụ ahụ. Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, njem ndị ahịa na-adị n'ịntanetị na-abụkarị nke na-agbaji ma bụrụkwa ihe mgbe ochie, ebe ọ bụ na ọ na-esiri ndị ahịa ike ịnweta ahụmịhe dị mma mgbe ha na-arụ ọrụ na ntanetị.
COVID-19 achọpụtakwala ụfọdụ isi ihe mgbu ndị ahịa na-enweghị ikike nke dijitalụ nwere ike inye aka dozie. Ihe dị iche iche nke njem ndị ahịa kpatara ọgba aghara tupu ọrịa, dị ka ichere n'ahịrị na ịkwụ ụgwọ, ga-emezịrị ka enweghị kọntaktị na nchekwa dị ka o kwere mee, na-akpọ maka itinye aka na dijitalụ. Ogwe nke kacha mma ugbu a ebiliwo n'ike n'ike; mgbanwe oge dị ogologo na atụmanya ndị ahịa maka mmekọrịta ndị ọrụ pere mpe ga-adịgide.
Maka otu nzukọ iji malite mgbanwe maka ọdịnihu dijitalụ ha, ọ dị oke mkpa iji ọsọ na ebumnuche wee wepu silos. Ahịa ahia, ahụmịhe ndị ahịa, iguzosi ike n'ihe na arụmọrụ ga-agwakọta na nkwado nke ebumnuche nkịtị. Idozi njem nke ndị ahịa mebiri emebi wee nweta ebumnuche uto, onye ọ bụla nọ na nzukọ ahụ ga-adị n'otu n'otu ọhụụ dijitalụ a na-ahụkarị. A ghaghi itughari ohuru a n'ime oru site na imeputa mmemme dijitalụ - karia oru dijitalụ - na-elegide anya na onye ahịa. Ztù na-ahazi ibu ọrụ site n'oge dị mkpirikpi na ndị ọrụ siled ga-emepụta ahụmịhe ndị ahịa na-enweghị atụ ma hapụ ohere uto dị ukwuu na tebụl. N'aka nke ọzọ, ịme ihe ọhụụ maka ịdị mma dijitalụ ga-eweta nlọghachi na-ekwe nkwa. Ọ ga-abụ ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere ìgwè ndị ejikọtara ọnụ - iji, ịmụ ihe, na ime ihe na nghọta data - ga-enwe ike ịkwaga ngwa ngwa na ọdịnihu.
Kedu otu nzukọ nwere ike isi ghọta ọhụụ dijitalụ ya?
N'iburu ọhụụ ogologo oge n'uche, ịkọwapụta atụmatụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịba ụba na-eto eto dị mkpa. Ihe ndị a dị mkpa nwere ike ịkọwa ọdịiche, uru, ogo, ma ọ bụ ịkwa ọkwa asọmpi asọmpi, ha kwesịrị ijikọ ọhụụ ụlọ ọrụ dum.
Ọ bụ ezie na akọwapụtara na njem ụlọ ọrụ ọ bụla na ọkwa ntozu dijitalụ ugbu a, lee ụfọdụ ụkpụrụ dị mkpa azụmaahịa ọ bụla kwesiri ịtụle iji di na njikere maka ọhụụ ọhụrụ:
Ahụmahụ dị mfe, echefu echefu, nke akọwapụtara - nye ndị ahịa ohere ịme ngwa ngwa na ime ihe ha chọrọ ime
Leverage ahaziri mmadụ oge ọ bụla enwere ike - jiri teknụzụ nyere ndị ahịa ihe ọ bụla chọrọ
Gbaa ume ma kwalite iguzosi ike n'ihe - leverage ike nke data iji ghọta omume ma na-akpali omume
Tinye teknụzụ ndị dị ugbu a ma jikọta ike ha - naanị otu ụzọ uto ga-esi gbadata bụ site na nchịkọta siri ike ma sie ike nke ọma
Agbaji silos - chọta ụzọ ụma ga-esi rụkọta ọrụ maka nnukwu uru
Nnukwu ndụmọdụ nke azụmahịa ọ bụla nwere ike ịbanye na ọnọdụ a ugbu a bụ ịhazi maka echi, ọ bụghị taa. Branddị ọ bụla kwesịrị ịgbalịsi ike na ijigide ụzọ esemokwu dijitalụ zuru oke iji mee ka nkwado na mmụba nke ego bawanye. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ akụzierela anyị ihe ọ bụla, ọ bụ na ọ nweghị oge ka mma ịhazi ma mepụta ihe maka ụwa na-arịwanye elu.
Tags: mgbanwendị ahịa ejikọrọCOVID-19ụzọ okporo ụzọọhụụ dijitalụ
Tim Duncan bụ Ọganihu Mgbasa Ngwaahịa na-eduga na Bottle Rocket, na-elekwasị anya n'inyere ụdị aka ịbawanye omume bara uru n'ime ahụmịhe ndị ahịa ha site na njikarịcha nke nnweta, ntụgharị, ntinye aka na njigide. Tupu Bottle Rocket, Tim rụrụ ọrụ na IBM dị ka onye na-ahụ maka Usoro Nhazi Azụmaahịa, ma gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Oklahoma na Mahadum Civil Engineering.